02:32:01 pm 04-Jun-2020
कामदार चाहियो ? श्रीयोगमा खोज्नुस्
तपाईंलाई पार्ट टाइम काम गर्ने मानिस चाहिएको छ ? कहाँ खोज्ने ? इन्टरनेटमा सर्च गर्नु हुन्छ । तर, पाउन मुस्किल छ । अब समाधान ल्याएको छ श्रीयोग डटकमले । मानिसको दैनिकीलाई सहज बनाउन श्रीयोग कन्सल्टिङ्ग प्रालिले श्रीयोग डट कम नामक वेभसाइटबाट यस्तो सेवा दिन थालेको छ । कम्पनीले यस डिजिटल प्लाटफर्मकोे प्रमुख उद्देश्य बेरोजगारी समस्याले अल्मलिरहेका जनशक्तिहरुमा रहेको सिप तथा अनुभवलाई उचित ढंगबाट प्रयोगमा ल्याई उनीहरुका लागि आम्दानीको बाटो सिर्जना गर्नु रहेको जनाएको छ ।
यस अनलाइनमा विभिन्न १८ वटा मुख्य समुह, १ सय ५० भन्दा बढी उप–समुह तथा ती पेशासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नाम, सम्पर्क नम्बर तथा ठेगाना, प्रोफाइल फिचर, नजिकको लोकेसनमा देखिने–नदेखिने बनाउन सक्ने, रेटिङ, रिभ्यु, शुल्क, अफर, कामका लागि उपलब्ध भएको, नभएको जानकारी समूह अनुसार राखी पार्टटाईम काम गर्ने मौका दिने कम्पनीले जनाएको छं । फुर्सदको समयलाई राम्रो कुरामा ब्यतित गर्दा समयको सदुपयोग हुनुका साथै पैसा पनि कमाइ हुन्छ ।
यस अनलाइनमा आफूलाई सूचिकृत गर्न चाहने ब्यक्तिले Sriyog.com/register मा गएर आफूलाई दर्ता गराउनु पर्छ । दर्ता गराउन मोवाइल वा इमेल ठेगाना आवश्यक हुन्छ । दर्ता गराउँदा आफ्नो ब्यक्तिगत विवरण, फोटो र अनुभवसमेत राख्न सकिन्छ । यसरी विभिन्न रोजगारीको किसिममा सूचिकृत भएका ब्यक्तिहरुलाई रोजगार दाताले उनीहरुको ब्यक्तिगत विवरण हेरेर सिधै सम्पर्क गर्न सक्छन् ।
डिजिटल प्लाटफर्म श्रीयोग डटकमले पार्टटाइम काम गर्ने, केही सीप भएको व्यक्तिहरूलाई लिस्टिङ् गर्नेछ । सो लिस्टअन्तर्गत आफूलाई चाहिएको व्यक्ति र उसले दिने सेवालाई फोनमा सम्पर्क गरी काम सम्बन्धी प्रस्ताव राखी काम गराउन सकिनेछ । हाम्रो दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक काम गर्ने सीपालु व्यक्तिहरू र काम गराउने व्यक्तिहरूलाई भेट गराउने प्रयास श्रीयोगले गरेको छ ।
श्रीयोग डटकम पूर्ण रुपमा पार्ट टाइम काम गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो जुन नयाँ सोचका आधारमा बनाइएको छ । हामी विभिन्न १८ वटा मुख्य समुह अनि १ सय ५० भन्दा बढी उपसमुहमा स्थानको आधारमा प्रदेश, जिल्ला, शहर र ठाँउ (उदाहरणका लागि, प्रदेश नं. १ भित्र मोरंग जिल्ला, त्यस भित्र बिराटनगर, अनि त्यसमा पोखरीया भन्ने स्थान), काम गर्ने, या भनौ सेवा दिने व्यक्तिहरुको विवरण राखिन्छ । जसले त्यस्तो काम गर्ने या भनौ सेवा दिने व्यक्तिहरुलाई खोजि रहनु भएको छ, त्यस्तो कामदार खोज्ने व्यक्ति र काम गर्ने व्यक्तिलाई वेबसाइट, मोबाइल एप्स र कल सेन्टरको माध्यमबाट कम्पनीले जोड्ने छ ।
आफूले खोजेको बेला न काम पाइन्छ न त काम गराउने मान्छे नै । यही गहन समस्यालाई समाधान गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । वेबसाइट, मोबाइल एप्स, टोल फ्री नम्बर, एसएमएसका साथै अन्य बिभिन्न मध्यमबाट प्रबिधिको प्रयोग गरी कामको बारेमा जानकारी गराउने कम्पनीले उद्देश्य लिएको जनाएको छ ।
आफूलाई चाहिएको ब्यक्ती तुरुन्त पाउन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो अनलाईन प्लाटफर्मको परिकल्पना गरिएको हो ।
तपाईँ पनि आफूलाई चाहिएको कामदार खोज्न श्रीयोग डटकम लगइन गर्ने कि ? बेरोजगार हुनुहुन्छ र कुनै सीप छ भने आफूलाई श्रीयोगमा लिस्टिँग गराउने कि ?